AKHRISO: Xildhibaan Aadan Ducaale Oo u digay dhallinta Soomaalida “War Hooy Dhaqankiina ha noqdo mid fiican, iska daaya Daroogada Iyo Shiishadda” | Afrikada
AKHRISO: Xildhibaan Aadan Ducaale Oo u digay dhallinta Soomaalida “War Hooy Dhaqankiina ha noqdo mid fiican, iska daaya Daroogada Iyo Shiishadda”
Afrikada, Nairobi: Mudane Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah mas’uuliyiinta Soomaalidu ay aadka u jecel yihiin, ayaa sheegay in loo baahan yahay in ay Dhallinyarta Soomaalidu ay kor u qaadaan sumcadooda iyo dhaqankooda.
Xildhibaan Aadan oo la hadlayay dadweyne badan oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa dhalinyarada uga digay in ay adeegsadaan Shiishada.
Kenya ayaa horey u mamnuucday adeegsiga Shiishada, waxaana dadka iibiya la sheegay inay wajihi doonaan ciqaab adag.
Aadan Barre ayaa sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi looga baahan yahay inay ka fogaadaan adeegsiga Shiishada, maadaama ay dhibaato nafeed iyo mid dhaqaalo xumo leedahay.
Mas’uulkani waxa uu dhinacyo badan ka taageeray Soomaalida isagoo jaamacado u diray dad tiro badan Oo haatan waxbartay kana shaqeysta dal iyo dibad..
Aadan Barre ayaa dhowr jeer oo hore difaacay Soomaalida iyo ganacsigooda guud ahaan Bariga Afrika kolkaas oo siyaasadaha looga soo horjeeday Soomaalida ay cirka isku shareereen, waxa uu ka doodaa baarlamaanada iyo xukuumadaha isaga oo ku qeylo dhaamiya in Soomaalidu yihiin dad asluub leh oo aan la nabsan karin inta isagu joogo.
Aadan Barre ayaa asbuucyadii aynu soo dhaafnay gudaha baarlamaanka Kenya isaga horyimaadeen madax heer wasiiro iyo saraakiil sare isaga oo difaacaya dadka asalkoodu Soomaalida ka soo jeedo.
Waxaa uu dhankooda u digay dhallinyarada in ay lafahooda u taxadaraan oo aysan isticmaalin daroogada, waxa uu mas’uulkani sheegay in looga baahan yahay dumarka dhankooda inay ku adkaadaan xerashada xijaabka oo aysan ka tagin dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida.
Mudane Ducaale ayaa ah hogaamiye firfircoon oo dhanka siyaasadda ku jira xisbiga Jubilee ee haya talada wadankaasi Kenya.